थपियो सगरमाथाको उचाइ : किन र कसरी बढ्छ हिमालको उचाइ ? « Janata Samachar
थपियो सगरमाथाको उचाइ : किन र कसरी बढ्छ हिमालको उचाइ ?
काठमाडौं । मंगलबारबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ फेरिएको छ । ८६ सेन्टिमिटरले बढेर सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर भएको छ । यो तथ्यले सगरमाथा मात्रै होइन नेपालका प्राय सबै हिमालको उचाइ बढेको संकेत गर्छ ।
भूभर्गविद्हरुका अनुसार नेपालका हिमालहरु नयाँ हुन् । जसको उचाइ हरेक वर्ष ४ खेखि ६ मिलिमिटरका दरले बढ्ने गरेको छ । केहि हिमालहरुको उचाइ त्यो भन्दा बढी १० देखि १२ मिलिमिटरका दर बढिराखेको भूगर्भविद्हरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपाल तिब्बतियन र इन्डियन प्लेटको बीचमा छ । र, यी दुई प्लेटको टकराव निरन्तर चलिराखको छ। यहि प्लेटको टकरावकै कारण हिमालय श्रृंखलाको निर्माण भएको थियो ।
भूगर्भविद्हरुका अनुसार यो श्रृंखला निर्माण हुनुपूर्व थाइल्याण्ड, बर्मादेखि सिक्किम, भुटान, नेपालहुँदै पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म गहिरो र लामो टेथिस सागर थियो । यसले भारतीय उपमहाद्वीप र तिब्बतको प्लेटलाई भिन्न बनाएर राखेको थियो ।
हालको हिमालयको उत्पत्ति यही सागरबाट भएको हो । भारतीय उपमहाद्वीपको प्लेट र तिब्बतीयन प्लेटको बीचमा आपसी भौगर्भिक टक्करहुँदा बीचको टेथिस सागरको गहिरो भूभाग भौगर्भिक हलचल, भूकम्प तथा ज्वालामुखी विष्फोट हुँदै यी दुई अजंगका प्लेटको बीचमा परेर सगरमाथासहितका हिमालय श्रृंखला निर्माण भएका हुन् । र, अहिले यी नै प्लेटको टकरावका कारण यी नयाँ हिम श्रृखलाहरुको उचाइ बढ्दै गएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।
विभागको भूकम्पिय अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख मोनिका झाका अनुसार इन्डियन प्लेट प्रत्येक वर्ष ४ सेन्टिमिटरका दरले तिब्बतीयन प्लेटतर्फ सरी राखेको छ ।
अध्ययन अनुसार इन्डिय प्लेट हरेक वर्ष दुई सेन्टिमिटर तिब्तियन प्लेट भित्र घुस्ने गरेको छ भने २ सेन्टिमिटर टुक्रिने गरेको छ । यहि कारण पहाड र हिमालहरुको उचाइ बढ्ने गरेको छ ।
नेपालमा बनेका हिमालहरु विश्वका अन्य देशको तुलानामा नयाँ हुन् । जो ५ करोड बर्ष पहिले मात्रै निर्माण भएका हुन् । योङ माउन्टेन भनेर चिनिने नेपालका हिमालहरु बढ्ने क्रममा रहेको भूगर्भविद्हरुको भनाइ छ । भूकम्पले यस्ता हिमालका उचाइ बढाउन र घटाउन मद्दत गर्दै आएको उनीहरु बताउँछन् । के त्यसो भए २०७२ मा गएको गोरखा भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ बढाएको हो त ? भूगर्भविद् समेत रहेकी भूकम्पिय अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख झा भन्छिन्– त्यो पनि केहि कारण होला तर, तर निरन्तर चलेको तिब्बतियन र इन्डियन प्लेटको टकरावका कारण उचाइ बढेको हो ।
भूर्गभविद् अनन्त गजुरेल पनि नेपालका हिमालहरु कुनै एक कारणले र कुनै एउटा घटनाले मात्रै नबढेको बताउँछन् । उनका अनुसार गोरखा भूकम्पको यसमा खासै ठूलो साइनो छैन् । पश्चिममा गएको भूकम्पले पूर्वमा यति ठूलो फरकपना नल्याउने उनको तर्क छ । निरन्तर चलिराखेको प्लेटहरुबीचको संघर्षको परिणाम स्वरुप सगरमाथाको उचाइ बढेको उनी बताउँछन् । हजारौं वर्षदेखि यो क्रम चलिराखेको र यहि कारण नेपालका अन्य हिमालहरुको पनि उचाइ बढेको उनको तर्क छ ।
भूगर्भविद्हरुका अनुसार नेपालमा छिटो छिटो भौगर्भिक परिवर्तहरु आइराखेका छन् । सगरमाथा र हिमालयहरुको उचाइ बढ्नु यसको प्रमाण भएको भूगर्भविद् गजुरेलको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालका पहाड र नदीले पनि नेपालमा भौगर्भिक परिवर्तन चाडो चाडो भइराखेको प्रष्ट संकेत दिइराखेका छन् । २०/३० वर्षमै बद्लिएको नदिको बहाब, फरक बनेका पहाडहरु र अग्लिएका हिमालहरुले नेपाल भौगर्भिक अध्येताहरुका लागि जानकारी लिने र अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला बनेको छ ।
सगरमाथाको उचाइ बढ्नु सामान्य विषय नभएको भूगर्भविद्हरुको तर्क छ । यसले नेपालका हिमाल पहाडको विकासक्रम प्रष्ट रुपमा झल्काएको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरुको अध्ययनअनुसार नेपालमा अझै केहि सय वर्षसम्म हिमालहरु निरन्तर बढ्ने र यसको विकासक्रम चलिरहने छ ।